Fahafahana PCBA - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCBFuture dia manome ny mpanjifanay serivisy fivoriambe Turnkey PCB azo antoka hahazoana vokatra tsara kalitao amin'ny vidin'ny fifaninanana. Serivisy fivoriambe PCB mijanona iray ao anatin'izany ny PCB manufacturing, Components sourcing, PCB assembling and Test. Amin'ny maha-orinasa fivorian'ny birao fanaovana pirinty voatondraka anay, dia manokanay manokana amin'ny fidirana an-tampony sy amin'ny alàlan'ny fanangonana ny lavaka, ny rafitra sy ny masininay rehetra namboarina mba hahafeno ny endrika, ny famaritana ary ny habetsaky ny serivisy fivorian'ny elektronika anao.
Manana fahaiza-manao matanjaka amin'ny fivorian'ny PCB ambonin'ny tany izahay, ary ny tsipika famokarana SMT avo lenta avy any Alemana, Japon ary sns. Ny ekipanay injeniera dia matihanina sy azo antoka hikarakarana ny DFM, ny injeniera, ny famokarana ary ny fitsapana. Afaka mandefa elektronika turnkey PCB haingana indrindra afaka herinandro isika.
Haben'ny kely indrindra: 10mm x 10 mm
Max habe: 500mm * 800mm
Hentitra, matevina, mafy-miolikolika, Base vy
HASL Lead or Lead free, ENIG, Im Silver, OSP, nopetahany takela-bolamena, sns
Izay endrika rehetra
Isa 5 tapitrisa isan'andro
Sombiny 1 ka hatramin'ny 500.000 pcs
SMT / SMD tokana sy roa sosona
THT (amin'ny alàlan'ny fivorian'ny teknolojia lavaka)
SMT & amin'ny alàlan'ny fanangonana lavaka
Chips kely indrindra
Mpitondra chip tsy misy firaka
Mikraoskaopy hatramin'ny 20X
AOI (Fanaraha-maso optika mandeha ho azy)
Tsy mitarika sy tsy mitarika
Fako na Tube
Reel Partial ary Reel feno
Ilaina ny fisie
Gerber fisie na fisie rakitra
Lisitry ny BOM (Volavolan-pitaovana)
Misafidiana ary apetraho ireo rakitra raha manana
Raiso ny Quote Assembly PCB anao:
Ny vidin'ny fivoriambe PCB ao anatin'izany ny vidin'ny famokarana PCB, ny vidin'ny singa, ny vidin'ny fivoriambe / fitsapana PCB. Raha te-hahazo teny nindramina marina dia alefaso azafady ny fisie Gerber, ny lisitra BOM, ny fepetra takiana amin'ny famokarana ary ny habetsaky ny takianavarotra @pcbuture.com . Hiverina aminao izahay miaraka amin'ny teny ofisialy ofisialy ao anatin'ny 2 andro.